‘तिमीसँग’को सुटिङको कहाँ पुगिन् साम्राज्ञी ? - hamro Desh
‘तिमीसँग’को सुटिङको कहाँ पुगिन् साम्राज्ञी ?
चलचित्र ‘ड्रिम्स’ बाट नेपाली चलचित्र जगतमा राज गरेकी नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह । चलचित्र ‘ड्रिम्स’मा गरेको अभिनयको कारण उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी आशालाग्दो नायिकाको रुपमा स्थापित भईन् । चलचित्र ‘ड्रिम्स’ आएसँगै साम्राज्ञीको कार्यब्यस्तता पनि ह्वात्तै बढ्यो । ‘ड्रिम्स’ पछि उनको ‘ए मेरो हजुर २’ प्रदर्शनमा आईसकेको छ भने अर्को चलचित्र ‘तिमी सँग’ प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ । केहि महिना अघि भदौ ८ गते प्रदर्शन मिती तोकिएको चलचित्रको पोस्ट प्रोडक्सनका काम नसकिए पछि प्रदर्शनम मिती सारिएको बताईएको थियो ।
तर अहिले सोही चलचित्र युनिट सुटिङको लागि हिमाली भेगमा पुगेको छ । नायिका साम्राज्ञीले आफ्नो सामाजिक संजालमा सुटिङको लागि हिउँ जमेको ठाउँको तस्विरहरु सेयर गरेकी छिन् । इंस्टाग्राममा दुई तस्विरहरु पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘At the shooting location … not allowed to tell where?!#sorry#Timisanga #movie #beautifulnepal#loveinthesnow ✨✨✨’ तिमीसँगको सुटिङ लोेकेसनमा भएता पनि चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशकले लोकेशनको बारेमा जानकारी नदिनको लागि आग्रह गरेको साम्राज्ञीले आफ्नो पोस्टमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
हिउँमा खेल्न एकदमै मन पराउने साम्राज्ञीलाई इंस्टाग्राममा सेयर गरेको तस्विरमा एकदमै क्युट देखिएको छ । फोटोमा उनी रातो ज्याकेट र कालो पाईन्टमा देखिएकी छिन् भने उनको पृष्ठभुमिमा सेताम्मे हिउँ छ ।
उनले आफुले फोटो खिचेको लोकेसन भन्न नमिल्ने बताएता पनि उनका धेरै फ्यानहरुले बिभिन्न ठाउँहरु अनुमान लगाएका छन् । त्यसैमध्येकी एक फ्यान अस्मिता घिमिरेले भने ठोकुवा गर्दै लेखेकी छिन् कि उनी ‘तिमी सँग’ चलचित्रको गीत सुटिङको लागि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छिन् । यस्तै कमेन्ट गर्नेमध्ये धेरै फ्यानले उनले फोटो खिचाएको ठाउँ म्याग्दी जिल्लाको ‘घोरेपानी’ पनि भनेका छन् । जहाँ भएता पनि ‘तिमी सँग’को सुटिङ छिट्टै सकिएर पर्दामा हेर्न पाईयोस् भन्ने साम्राज्ञीका धेरै फ्यानहरुको चाहना छ ।
बरुणले सोनाक्षीलाई भने–‘भाउजु’
‘नेपाल आइडल’को फाइनल कहाँ हुदैछ ?